Ny ramanavy tsara hatao amin'ny Halloween miaraka amin'ny ankizy | Asa tanana
Ny ramanavy mahatsikaiky hatao amin'ny Halloween miaraka amin'ny ankizy
Jenny monge | | Decor, asa-tanana, Asa tanana taratasy, Asa tanana Halloween
Manao ahoana daholo! Manakaiky kokoa ny Halloween, noho izany, ao anatin'ity asa-tanana ity no itondranay anao ny fomba fanaovana a ramanavy mahafinaritra hatao amin'ny ankizy.
Te hahita ny fomba hanaovana azy ve ianao?
1 Fitaovana izay ilaintsika mba hanaovana ny ramanavy mahafatifaty antsika
2 Tanana amin'ny asa-tanana
Fitaovana izay ilaintsika mba hanaovana ny ramanavy mahafatifaty antsika
Baoritra na lamba fotsy
Karatra mavo maivana
Lakaoly na lakaoly hafainganam-pandeha hafa
Tanana amin'ny asa-tanana
Azonao atao ny mahita ny fomba fanaovana an-tsipiriany ireo asa tanana ireo amin'ity video manaraka ity:
Ny dingana voalohany dia ny manapaka ireo sombin-kazo. Noho izany dia hokapainay amin'ny baoritra mainty mahitsizoro roa, ny iray manodidina ny 15cm x 7cm ary ny 15cm x 5cm hafa. Izahay dia mitahiry ny efa-joro voalohany ary ilay kely aforintsika roa ary ataontsika sary ary manapaha elatra ramanavy. Avy eo dia mamelatra sy manapaka amin'ny antsasany izahay mba hanana elatra roa misaraka.
Ao anaty baoritra mainty ihany koa no hofongorinay faribolana kely roa ho an'ny mpianatra sy tongotra roa.
Ao anaty baoritra fotsy dia hanapaka efamira manodidina ny 2cm x 2cm isika, aforeto amin'ny antsasany ary hasiana telozoro izay hiasa ho toy ny tusk. Rehefa mivelatra dia hanana isika tady roa mitovy. Nanapaka faribolana roa kely kokoa noho ireo mainty ho an'ny mpianatra koa izahay.
En baoritra mavo maivana dia hofaranay ny faribolana roa ho an'ny maso. Ho an'ireo izay handoa ireo faribolana mainty izahay izany dia hahatonga ny mpianatra ary ny fotsy eo ambony amin'ireo dia hanana maso feno.
Ary afaka manomboka manangona sy mametaka ny ramanavy isika. Manao a varingarina miaraka amina baoritra baoritra lehibe hanaovana ny vatana. Mametaka elatra izahay avy any aoriana ary ananantsika ny maso, vava sy tongotra mialoha mba hitady fomba izay tiantsika sy ifikirantsika. Mitsiky izahay misy marika.
Mba hamita anao mametraka blush izahay eo amin'ny takolaky ny batinay.
Ary vonona! Afaka manamboatra maromaro isika ary mandamina azy ireo manodidina ny trano na amin'ny fehiloha fehiloha handravahana.
Manantena aho fa ho faly ianareo ary hanao ity asa tanana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » Fotoana manokana » Asa tanana Halloween » Ny ramanavy mahatsikaiky hatao amin'ny Halloween miaraka amin'ny ankizy
Tompon'ny labozia Halloween miendrika mamanay
Amboary indray ny boaty misy decoupage